Xasan: lama hadlayno Al-shabaab
13 Dec 13, 2012 - 5:59:44 AM
Madaxweynaha Somalia Xasan Sh. Maxamuud ayaa sheegay inaysan la hadlayn Al-shabaab inta ay rumeysan yihiin in Somalia aan la kala lahayn, isagoo sheegay in Awood ahaan hada Al-shabaab laga adkaaday.
Xasan Shiikh wuxuu sheegay in dowladiisu ay ka go'an tahay inay labada gacmood ku qaado cid walba oo kasoo baxda Al-shabaab iskana xoorta fikirka ku saleysan in dadka la dilo, isagoo Xubnaha Ajnabiga ah ee Al-shabaab la jira ugu baaqay inay dalka isaga baxaan.
"Inta qof Al-shabaab ka tirsan uu hubeysan yahay sidoo kalena aaminsan yahay in dalkan aan la kala lahayn lama galayno wadahadal, balse qofkii kasoo baxa waan soo dhaweynaynaa" ayuu yiri Xasan Shiikh oo intaas ku daray in dowladiisu ay u heelan tahay nabad.
Sidoo kale wuxuu sheegay in Dhalinyaradii Al-shabaab u dagaalamayay ay duurka ku jiraan ayna u direen odayaal halkaas kasoo saara, wuxuuna carabka ku dhajiyay in dowladu ay ugu baaqayso Dhalinyarada Kooxdaas ka tirsan inay isaga soo tagaan oo ay kusoo biiraan shacabka Soomaaliyeed.
"Xubnaha Al-shabaab ee Ajnabiga ah wax naga dhexeeya ma jiraan waxaan ka doonaynaa oo keliya inay dalkeena nooga baxaan" ayuu si caro leh u yiri Xasan oo wareysi siinayay BBC qaybta Soomaaliga.
Madaxweynaha Somalia oo dhinaca ka hadlay Wadahadalkii ay kula jireen Maamulka Somaliland ayaa sheegay inay sii wadayaan, isagoo hakadkii ku yimid wadahadalada ku sheegay doorashooyinkii ka dhacay Muqdisho iyo Hargeysa.
Ugu dambeyn Xasan Shiikh wuxuu daaha ka rogay in Dowladiisu ay ku shaqeyso Dhaqaalaha ay ka hesho Dekeda iyo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho, uuna socdo qorshe lagu horumarinayo Adeegyo ay ka mid yihiin Canshuuraha.